11 | April | 2017 | Danya Wadi
By danyawadi April 11, 2017 Leaveacomment
ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲကျင်းပခဲ့တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ဦးမြို့ မြတန်ဆောင်ဆရာတော် ဦးနန္ဒာသာရကို ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့က လူဝတ်လဲပြီး စစ်တွေထောင်ကို ပို့လိုက်ပြီလို့ သိရပါတယ်။ ဧပြီ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်တဲ့ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်နေ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့မှာ ရက္ခိုင့်တပ်မတော်ဖလား ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဘောလုံးပွဲကျင်းပခဲ့တာကြောင့် မြောက်ဦးမြို့ ခမရ ၅၄၀ ကနေ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပြီး မြောက်ဦး မြို့မရဲစခန်းက ဆရာတော်ဦးနန္ဒာသာရနဲ့ ကိုခိုင်နီမင်းကို ဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ စစ်တွေတရားရုံးမှာ စွဲချက်တင်လို့အပြီး ညနေ ၄ နာရီအချိန်မှာ စစ်တွေထောင်ကို လူဝတ်လဲပြီး ပို့လိုက် တာလို့ ၈၈ အကျဉ်းသားဟောင်း ကိုနိုင်နိုင်က ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။ “မနေ့က ညနေ ၄ နာရီဝန်းကျင်လောက်မှာ စစ်တွေထောင်ကို ပို့လိုက်ပါတယ်။ မနေ့က စစ်တွေ […]
ရခိုင်မှာ မျိုးဖြတ် ရှင်းလင်းမှု မရှိဟု မြန်မာ အစိုးရ ထပ်မံ ငြင်းဆို
11 ဧပြီ၊ 2017ကျော်ကျော်သိန်း အမျိုးသား လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်း ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မူစလင်လူနည်းစုတွေကို လူမျိုးတုံးသုတ်သင်နေတယ်ဆိုတာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူးလို့ အမျိုးသား လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်းက ဒီကနေ့မှာပဲ ထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်း အတွင်းက ဘီဘီစီ သတင်းဌာနနဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာ နိုင်ငံတော် အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ပြော သွားတာကို ဦးသောင်းထွန်းက ဒီကနေ့ သံတမန် အသိုင်းအ၀ိုင်းကို ထပ်ပြောသွားတာပါ။ ရခိုင်ပြည် အခြေအနေ အရပ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဗဟိုဌာန NRPC မှာ သံတမန်တွေကို ဦးသောင်းထွန်းက ရှင်းလင်းပြောဆိုတဲ့ပွဲကို ကိုယ်တိုင် သွားခဲ့တဲ့ ကိုကျော်ကျော်သိန်း က အပြည့်အစုံပြောပြပါမယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးပုဂ္ဂိုလ် ဦးသောင်းထွန်းဟာ ရန်ကုန်မြို့အခြေစိုက် ကုလသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေ […]
Watch to see how EASY it is to use this for sewing!
Meet Quick Handy Stitch – the world’s first portable and cordless sewing machine. You can quickly stitchapocket orarip with this amazing new device inamatter of minutes. No need to storealarge clunky sewing machine. The Quick Handy Stitch™ is designed to easily fix any tear, rip or hem! This microsized […]